मोबाईल हराएमा मेरो सुरक्षाले दिन्छ नयाँ मोबाइल ! « Pahilo News
मोबाईल हराएमा मेरो सुरक्षाले दिन्छ नयाँ मोबाइल !
प्रकाशित मिति : 17 July, 2018 4:08 pm
काठमाडौ, १ साउन । मोबाइल हराउने वा विभिन्न कारणले बिग्रिने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब ढु क्क हनुहोस, चिन्ता लिनु पर्देन, तपाईको मोबाइलको रक्षामेरो सुरक्षाले गर्ने भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको मोबाइल प्रोटेक्शन प्लानले मोबाइलका प्रयोगकर्ताको हैरानीको अन्त्य गर्ने भएको हो ।
मेरो सुरक्षा प्रालिले स्मार्टफोनको सुरक्षाको लागि मेरो सुरक्षा स्मार्टफोनको गर्छरक्षा नामक योजना सुरु गरेको छ । मेरो सुरक्षाका अनुसार जुनसुकै स्मार्टफोन ड्यामेज भएमा, हराएमा वा चोरी भएमा मोबाइलका प्रयोगकर्ताले प्रोटेक्शन प्लान अन्तरगत नयाँ मोबाइल पाउने छन् । साथै कम्पनीले हराएको सम्पूर्ण डाटा रीकभर गरी प्रयोगकर्तालाई नयाँ मोबाइलसेट उपलब्ध गराई टेन्सन मक्क्त जीवनमा सहयोग गर्नेछ।
थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम सुरु
काठमाडौं, २ माघ । थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काठमाडौंतर्फबाट सुरुङ खन्ने काम शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ । धादिङतर्फबाट भने
मकवानपुर, २८ पुस । वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश राजधानी हेटौँडाबाट
कर्णाली, २७ पुस । विगतमा घैयाको भाउमा जाने अदुवाले अहिले राम्रै मूल्य पाउन थालेपछि